ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိထားဖို့လိုမလဲ - Hello Sayarwon
ကိုယ်တိုင်အတွက်ဖြစ်ဖြစ် မိသားစုဝင်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမှာလဲမသိလို့ အခက်တွေ့နေတဲ့ Hello ဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးများရှိလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးက သင့်အတွက်ပါနော်…….
ခန္ဓါကိုယ်မှာဝေဒနာတွေရှိနေလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘာဝေဒနာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကို စစ်ဆေးတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတစ်ရပ်ပါ။ရောဂါရှိနေခဲ့ရင် ကုသလို့ရသလို မဖြစ်လာသေးတဲ့ရောဂါတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လည်း အခွင့်အရေးရနိုင်ပါတယ်။ လုပ်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုပေါ့။
အတင်းအကျပ်မပြောချင်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပုံမှန်လုပ်တာကကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အထတစ်ခုပါ။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်တာကြောင့် အခုလိုမျိုး အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေလည်းရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ လူတိုင်းကတစ်ပုံစံတည်းလုပ်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်အလိုက်ကွာခြားနိုင်သလိုရောဂါအခြေအနေအရလည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင်က အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေထဲမှာမှ အသက် ၁၉ နှစ်ကနေ ၂၁ နှစ်အတွင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုက ၂ နှစ် တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ၃ နှစ်တစ်ကြိမ် လုပ်ပေးရင်ကိုလုံလောက်ပါပြီ။ တကယ်လို့ ၂၂ နှစ်အထက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု တစ်ကြိမ်ကနေ ၃ ကြိမ်လောက်အထိပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
အဝလွန်နေလားဆိုတာစစ်ရမယ် ((BMI) ခန္ဓါကိုယ် ထုထည်ညွှန်းကိန်းကို စစ်ဆေးတာပါ)။
ဆီးချိုရှိ၊မရှိ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေစစ်ရမလဲ……
အဝလွန်နေလားဆိုတာကိုစစ်မယ်((BMI) ခန္ဓါကိုယ် ထုထည်ညွှန်းကိန်းကို စစ်ဆေးတာပါ)
faecal occult blood test (FOBT) လုပ်မယ် (အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိ၊မရှိကိုသွေးဖောက်စစ်တာပါ)
အူမကြီးအတွင်းကို မှန်ပြောင်းထည့်ပြီးစစ်မယ်။ ပုံမှန် ၂ နှစ်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမြင်အာရုံ ထိခိုက်မှုတွေကို စစ်ဆေးမှာပါ။ အသက်၆၅ နှစ်အထက်ရောက်လာသူတိုင်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ မျက်စိရောဂါဖြစ်ဖူးတဲ့မျိုးရိုးရှိမယ်။ မျက်လုံးထိခိုက်ဖူးမယ်။သွေးတိုး ဒါမှမဟုတ် ဆီးချိုရှိတာကြောင့်ဆေးသောက်သုံးနေရမယ်၊ အခြားဆေးဝါးတစ်ခုခုသောက်သုံးနေရမယ်ဆိုရင် မျက်လုံးစစ်ဆေးမှုကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
အသက် ၅၀ အထက်လူတိုင်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ အရိုးပါးနေလား၊ အရိုးပွနေလားဆိုတာကို သိရှိနိုင်စေဖို့ အရိုးသိပ်သည်းဆကို စစ်ဆေးတာပါ။
လေဒီတို့လုပ်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ…….
human papilloma virus(HPV) စစ်ဆေးမှု
HIV/AIDS တို့လိုမျိုး လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကို စစ်ဆေးမှုတွေကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေလုပ်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ…..
ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့လုပ်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ…….
အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့အနေနဲ့ကတော့ တစ်နှစ်ကို တစ်ကြိမ်
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းမှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေစေဖို့မေ့ထားလို့မဖြစ်တဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ပုံမှန်ထိုးနှၤတာပါပဲ။
အသည်းရောင် အသားဝါ A ကာကွယ်ဆေး
အသည်းရောင် အသားဝါ B ကာကွယ်ဆေး
HPV ကာကွယ်ဆေး စတဲ့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုသေသေချာချာလေးထိုးပေးဖို့လိုပါမယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာ၊စောင့်ရှောက်မှုတွေလုပ်တဲ့အဆင့်တွေအားလုံးပြီးသွားရင်လုပ်ရမယ့် အဆင့်တွေကတော့
အယ်လ်ကိုဟောလျှော့သောက်ပါ။ အယ်လ်ကိုဟောဖြတ်ပါ။ စတဲ့အချက်လေးတွေကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာလိုက်နာဖို့ပါ။
အခုပြောခဲ့တာတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ Hello ဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးရဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေတော့မှာ အသေအချာပါ။
ပိုကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးအတွက် ရက် ၃၀ Diet